“Waxaan rajeynayaa in Neymar Jr uu yimaado kooxda Real Madrid” – Marcelo – Gool FM
Horudhac: Manchester United vs Burnley… (Red Devils oo doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato caawa)
“Waxaan rajeynayaa in Neymar Jr uu yimaado kooxda Real Madrid” – Marcelo
Dajiye July 20, 2019
(Madrid) 20 Luulyo 2019. Mustaqbalka xiddiga reer Brazil iyo Paris Saint-Germain ayaa ilaa iyo haatan aanan fadhinin tan iyo markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeyay isaga iyo maamulka kooxda reer France.
Hadaba daafaca kooxda Real Madrid ee reer Brazil Marcelo ayaa muujiyay sida uu u doonayo inuu arko xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Neymar Jr oo xiran maaliyada Los Blancos mustaqbalka dhow.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain Marcelo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay rabitaankiisa ah in Neymar ay ka wada shaqeeyaan Real Madrid.
“Neymar wuxuu leeyahay astaamo isaga ka dhigaya inuu noqdo mid ka mid ah shanta ciyaaryahan ee adduunka ugu fiican, waa wax cajiib ah”.
“Waa ciyaaryahan aan la saadaalin Karin islamarkaana ay adag tahay in la xakameeyo, Marka uu daafaca ka fekerayo sida Neymar u dhaqaajin doono, isagana wuxuu u dhaqaaqaa qaab kale ee ka duwan, taasoo ka dhigeysa daafaca kasoo horjeeda in xaalada ay ku adkaato”.
“Waan ku farxi lahaa hadii aan arko Neymar oo ah ciyaaryahan ka tirsan kooxda Real Madrid, in lagu arko Madrid ayaa noqon doonta mid xiiso leh”.
“Real Madrid ayaa had iyo jeer waxay ka shaqeysaa sida ay ku heli lahayd ciyaartoyda ugu fiican addunka, sidaas darteet nolosha hore Neymar Jr ee kooxda Barcelona, wax saameyn ah kuma yeelan doonto qolka dhar badalashada ee Los Blancos”.
Zidane oo ka hadlay mustaqbalka xiddigaha Gareth Bale iyo James Rodríguez